JINGHPAW KASA: ဖားကန့် ကထန်ယန်တွင် တိုက်ပွဲဖြစ်ပွား
ကချင်ပြည်နယ် ကေအိုင်အိုအစိုးရ အနောက်ပိုင်းတိုင်း တပ်မဟာ (၂) အုပ်ချုပ်နယ်မြေဖြစ်သော ဖားကန့်ဒေသ လုံးခင်းနယ် ကထန်ယန်ကျေးရွာတွင် ဇန်န၀ါရီ (၁၃) ရက်နေ့ မနက် (၆း၀၀) နာရီအချိန်ခန့်တွင် ကေအိုင်အေမျိုးချစ်ရဲဘော်များနှင့် ဗမာစစ်တပ်သို့ တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်း သတင်းရရှိ ပါသည်။ တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားရခြင်း အကြောင်းရင်းမှာ ဖားကန့်ဒေသသို့ ဗမာစစ်ကြောင်းများ ထိုးစစ်ဆင်လာ သောကြောင့် ကေအိုင်အေ မျိုးချစ်ရဲဘော်များ ခုခံတိုက်ခိုက်ရခြင်းဖြစ်ပြီး၊ စစ်ပွဲကြောင်း အနီးတ၀ိုက်ရှိ ပြည်သူများ လုံးခင်း၊ မော်စီစာ ရှိ ဘုရေားကျောင်း၊ ဘုန်းကြီးကျောင်းများသို့ အများအပြား ရောက်ရှိ ခိုလုံ လာကြကြောင်း သတင်းရရှိပါသည်။
There wasabattle between KIA patriotic soldiers and Burmese troops in Ka Htang Yang village, Lung Hkang township and Hpakant region, KIA (2nd) brigade area at 06:00 AM on 13rd January according to KIA front line officer report. One of the reason of battling was due to Burmese Government troops launched an offensive action to the Hpa Kant area and KIA prevented them. Now, the civilians hide in Lung Hkang and Maw Si Zaw churches and monasteries.